Họtelu ndi di na Abuja, Federal Capital Territory - Tinye akwụkwọ ugbu a, Kwuọ ụgwọ ma emesi a!
Ọ bụrụ na ị na a bia neleta na Abuja nke mbụ, ihe mbụ ị ga- achọpụta bụ nkume na ugwu gbara ya gburugburu. Bu nke ekere na afo 1976 dị ka obodo isi etiti maka ịdị n'otu, ọ na-agbakụ ma nabata agbụrụ nile na omenala. Abuja, na adịghị ka ọtụtụ obodo ndi di na Nigeria bu nke ahaziri nke ọma. Njikota nke okporo ụzọ ya di iche iche, gburugburun ya na ụlọ di na ya bụ udi nke mba ụwa. Ọ bụ obodo ochichi isi nke Nigeria. Ulo onye isi ala Nigeria bu nke a na akpo (The Aso Rock Presidential Villa) na okwu beeke, ulo nke ndi oso onye isi ala achi na ọtụtụ ndị òtù ọchịchị gọọmenti ndi ọzọ dicha na Abuja.
Agbataobi ndi di na Abuja
Obodo Abuja nwere agbataobi ndi mepere-emepe nke ọma, ebe obibi di elu n’ime obodo nta ya (Central district) gụnyere Maitama, Wuse, Asokoro na Garki na ebe ndi ọzọ di na akuku ya ebe ụmụ mmadụ bijupụtara na ya, ebe ndi dị ka Kado, Jabi, Utako, Dugu tinyekwara ebe a na akpo satellite municipals bu ebe nke enwere ọtụtụ ụlọ ndi madu bi na ya n'ime obodo nta ya (district). Abuja bụ otu n'ime obodo ebe a na ekuru ume ndu na mba odida anyanwu nke Afrika, nwere otutu ụlọ ndi di nma nke ukwu u. Ọ nwere ihe karịrị nde mmadụ asaa na iri puku asaa na asatọ (778,000). Mediterranean Họtels Abuja nwere oké ihe ndi eji atụrụndụ mmanu maka gi na ndi enyi gi. Nweta udo na anuri nnoko nke egwuregwu nkporindu a na akpo (picnic) na okwu beeke, nke gi na ndi enyi gi na oge ehihie anwụ na ikuku ndu na eku na Aso Rock and Cave Gardens bu nke juru na omume ma ọ bụ gi a ga ihe ụbọchị egwuregwu ntụrụndụ na wonderland Park. I kwesịkwara I ga lee ogige ebe ihe osise na nka na uzu di na Abuja (Abuja Arts Villages) dị nnọọ ma agafee Sheraton Hotel na Abuja, ebe ngosi ihe agha mgbe ochie (Museums) dị ka Ladi Kwali Pottery centre, Julie Useni Zoo ma hụ anụ ọhịa dị iche iche.
Ime njem mkpaghari na Abuja
Obodo a nwere ugboala ime njem di ọnụ ala maka njem nke ọha na eze, Were ugboala tagzi na-acha akwukwo ndu, akwukwo ndu na ọcha (green and white) ga ebe ọ bụla ichoro I ga na emefughi ego di ukwu site n'akpa gi, ụgbọala bọs na adi na ebe ụgbọala na akwusi. Ígwè ogba tumtum keke napep amamana na agbakwa na ụzọ ndi di gasị nime obodo. Ichọrọ ụbọchị ntụrụndụ ezumike na ọdọ mmiri? I nwere ike ime nke a na ọtụtụ họtelu ndi di na Abuja. Ga nwalee Rockview Họtelu Abuja, maka ọdọ mmiri ya nke di ukwuu di ka nke eji amaka egwuregwu Olumpiki. Amara họtelu ndi di na Abuja nkeoma maka uzo azumahia ha na nri obodo Nigeria na nke mba ofesi ha n'èzí pụrụ iche di ụtọ nke ukwu, gaa na Chelsea họteelu Abuja ma ọ bụrụ na ị hụrụ nri obodo Nigeria n'anya ma ọ bụ Bolingo Họteelu Abuja, Chez Victor ma ọ bụ Sinoni maka nri mba ofesi bu ndi dicha na obodo nta (Central District). Ọ bụrụ na ị na-achọ họteelu nwere nchekwa tara ochichi n'ime obodo nta Wuse (Wuse district), ga kpoturu Valencia Họteelu Abuja ma na-enwe anụri na ihe ozi nke ime imulo ha na ezi ihe oriri na mmanya ha nke ubochi nile.
Họteelu Ndi di na Abuja
Oge kasị mma ileta Abuja bụ n'oge ọkọchị malite na onwa iri na afo mgbe mmiri ozizo na akwusitụla, mgbe ahụ, i nwere ike igwu mmiri na Gurara Waterfalls, site na ikwu obere ugwo nke ọnụ ụzọ, ị ga-enwe oge nke ndụ gị. Obibi ndu nke abali ya bụkwa nke na akpotuakpotu. Ga nleta na Elephant Bar na Sheraton họteelu Abuja maka ezi egwu na ihe oriri ndi di nma, ulo ebe ọṅụṅụ mmanya ndị ọzọ I pukwara I ga bụ Play Lounge, Avatar Lounge, Dome na ikpotu ole na ole aha. I nwekwara ike ịhụ họteelu ndi di ọnụ ala na Abuja dị ka Họtelu de Bently nke di na Utako, ji otu kilometa pụọ site na isi obodo nta (main district).